Cumar Cabdirashiid oo isha ku haya fursada ah in uu u tartamo madaxweynaha Puntland sanadka 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCumar Cabdirashiid oo isha ku haya fursada ah in uu u tartamo madaxweynaha Puntland sanadka 2019
Cumar Cabdirashiid oo isha ku haya fursada ah in uu u tartamo madaxweynaha Puntland sanadka 2019
August 25, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Cumar Cabdirashiid Cali. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Puntland]
Garoowe-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa tixgelin doona fursada ah in uu u tartamo madaxweynaha Puntland, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Ilo-wareedyo ku dhow isaga ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in dad badan oo jooga Puntland ay ka dalbadeen Cumar Cabdirashiid Cali in uu ka qeybgalo doorashada madaxtinimada Puntland ee sanadka 2019.
“Dad badan oo ay kamidyihiin siyaasiyiin, ganacsato iyo odayaasha dhaqanka ayaa Cumar ka dalbanaya in uu u tartamo doorashada madaxtinimada Puntland,” ilo-wareedyada oo codsaday in aan magacooda la sheegin ayaa Puntland Mirror u sheegay.
“Cumar waa siyaasi kaasoo leh khibrad siyaasadeed waana ay fiicnaan lahayd haddii uu ku guuleysto madaxtinimada maxaa yeelay wax badan buu dalkiisa u qaban karaa.” Ilo-wareedyada ayaa intaas ku sii daray.
Cumar ayaa labo jeer oo kala duwan soo noqday Raysulwasaaraha Soomaaliya. Waa wiilka madaxweynihii hore ee labaad ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake, taasoo isaga siisay magaca uu ku dhex leeyahay dadka Soomaaliyeed.
Hanaankiisa siyaasadeed ayaa lagu qeexaa sida xasilooni siyaasadeed taasoo macnaheedu tahay “ma ay jiraan wax khilaaf ah”.
Cumar wuxuu xiriir fiican la leeyahay dalka Isutaga Imaaratka Carabta. Dhawaan, waxaa uu dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay taageerto xulufada uu Sucuudigu hoggaaminayo ee kasoo horjeeda Qatar.
Wakhtiga Madaxweynaha hadda jooga Cabdiweli Maxamed Cali ayaa dhammaan doona bisha Janaayo 2019, ma cadda haddii uu mar labaad uu tartami dooni.
July 1, 2017 Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo tagay magaalada Qardho
June 14, 2017 Wadahadalo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo hakad ku yimid
Sharmake eyes opportunity to run for Puntland President in 2019
Mareykanka oo sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan khasaare dad shacab ah kasoo gaaray weerar ka dhacay deegaanka Bariire
Sideed qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay koonfurta-bari ee Turkiga
Ankara-(Puntland Mirror) Sideed qof ayaa ku dhimatay tobonaan kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax weyn oo ka dhacay bartamaha Diyarbakir, oo ah magaalada ugu weyn ee Kudiyiinta koonfurta-bari ee dalka Turkiga, sida uu sheegay Raysulwasaaraha [...]
Doha-(Puntland Mirror) Diyaarada Qatar Airways ayaa duulimaadyo cusub ka bilaabi doonta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sida maanta oo Arbaco ah uu sheegay madaxa diyaaradda Akbar al-Baker. Ma uusan sheegin wakhtiga rasmiga ah oo duulimaadku uu [...]
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee Faransiiska u qaabilsan Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Talaado ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Antoine Sivan oo ah danjiraha cusub ee dalka Faransiiska u qaabilsan Soomaaliya. Ka guddoomida kadib, Madaxweyne Farmaajo [...]